Efa fantatray ny vidin'ny Xperia X Compact sy ny Xperia XZ | Androidsis
Amazon UK dia nanambara ny vidin'ny faritra ho an'ny Xperia X Compact sy Xperia XZ
Tamin'ity indray mitoraka ity dia nanaitra anay tamin'ny finday roa vaovao i Sony, ny Xperia X Compact sy Xperia XZ, noho ny antony tsotra fa ny voalohany dia terminal mahaliana misy refy kely kokoa ary sary tsara, raha ny faharoa kosa mety ho Xperia X satria nanana famaritana manokana. Ny sisa tavela ho fantatray dia ny vidiny.
Ny Xperia X Compact dia ho tonga amin'ny volana septambra, mety ho ny 25th of that month, ary ny Xperia XZ, miaraka amin'ny efijery 5,2 ″ Full HD, dia hanomboka ny volana Oktobra. Avy any Amazon UK izy io afaka mahita ny vidiny ianao ho an'ireo terminal Sony vaovao roa ireo.
Ny Sony Xperia X Compact, na fotsy, manga na mainty, dia tonga amin'ny £ 380, raha tahiry iray an'ny Xperia XZ dia hitondra anao hamoaka 550 pounds miaraka amin'ny fisafidianana loko mitovy. Raha manova ny vidiny amin'ny dolara isika, dia ho $ 505 sy $ 730 izany, na dia azo lazaina ihany koa aza fa ny vidiny farany ho an'ireo terminal ireo any Etazonia dia manodidina ny $ 400 sy $ 550.
Ho an'i Eropa dia mila mitazona 450 euro isika ary 600 € ho an'ny Xperia XZ any amin'ny ankamaroan'ny firenena ao amin'ny faritra. I Amazon mihitsy no mampanantena ny handefa ny X Compact amin'io andro 28 septambra io, raha ny XZ kosa dia voatanisa ho mbola tsy natomboka.
Ny vidin'ireto terminal ireto dia hibaiko ny zanabola azonao. Raha mihoatra ny 600 € ny Xperia XZ dia hisy izany amin'ny toerana mitovy amin'ny Xperia X rehefa natomboka izy io, na dia tokony ho an'ny XZ aza izy io. Eto ianao no manana ny fampahalalana rehetra amin'ity finday ity. Na izany na tsy izany, momba ny X Compact, toa hafahafa ny mieritreritra fa afaka mividy azy amin'ny € 450 isika, satria, na dia manana 4,6 santimetatra eo amin'ny efijery aza izy io, dia misy famaritana tsara ao anaty andinindininy. Farafaharatsiny afaka mahazo hevitra isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Sony » Amazon UK dia nanambara ny vidin'ny faritra ho an'ny Xperia X Compact sy Xperia XZ
Miakatra ambony sy midina ireo olon-dratsy. Ary ambonin'ny bokotra ao anatin'ny efijery. To shit
Ofisialy io, Samsung manakana ny fivarotana ny Galaxy Note 7 mba hisolo ny terminal izay voakasik'izany